Department of Labor: 02 poster03
AMNIGA IYO DAAFACA CAAFIMAADKA EE SHAQADA
(SAFETY AND HEALTH PROTECTION ON THE JOB - SOMALI)
Sharciga loo dajiyay Caafimaadka iyo Amniga Shaqada ee Minnesota 1973 (Dastuurka Minnesota Cutubka 182-Minnesota Statutes Chapter 182) wuxuu haqabtiraa amniga shaqada iyo daafaca caafimaadka ee shaqaalaha ayadoo dhammaan gobolkoo idil laga abaabulayo xaalado shaqoo amni iyo caafimaad leh. Sharcigu wuxuu caymi ahaan u haqabtiraa dhammaan shaqaalaha qeybta dadweynaha, laga reebo kuwa federaaliga, shaqaalaha shirkadaha madaxabannaan, laga reebo kuwa arrimaha gudaha iyo kuwa sida gaarka u hoosimaanaya sharciga federaaliga. Waaxda Shaqaalaha iyo Warshadaha ee Minnesota, Amniga Shaqada iyo Qeybta Caafimaadka (Minnesota OSHA), waa midda keliya oo masuul ka ah maamulidda sharciga. Minnesota OSHA waxey hirgelisaa amniga shaqada iyo heerarka caafimaadka iyo iney amni baarayaasha shaqada iyo kuwa caafcaafimaadka ay fuliyaan baarisyo lagu hubinayo hirgelinta sharciga.
LO SHAQEEYEYAASHU: Waa iney shaqaalahooda siiyaan xaalado iyo meelo ay shaqaalohoodu xor ka yihiin halisyada caadiga ah ee gaarsin kara geeri, dhawacyo halis ah ama dhibaato u geeysato shaqaalaha; adeecaan wixii la xariira amniga shaqada iyo heerarka caafimaadka oo ay Minnesota OSHA ku amartay. SHAQAALUHU: Waxaa shardi ku ah iney dhowraan dhammaan amniga iyo heerarka caafimaadka, qawaaniinta, xeerarka iyo amarrada sharciga hoos imaanaya oo ku taxluuqa falalkooda iyo camalka eey shaqada ku joogaan. BAARITAANKA: Sharcigu wuxuu donayaa in wakiilka loo shaqeeyaha iyo wakiil ay shaqaalahu so magacaabeen la siiyo fursad ay ku raacaan amni baarayaasha shaqada iyo caafimaadka sababo waxaa la xariira caawinaada baaritaanka. Wakiilka ay shaqaalaha soo magacaabeen, isagoo ka qeybgalaya baaritaanka, marna ma u gefayo waxaa uu xaqa u leeyahay ama mushaarka uu xaq u laha inuu shaqeysto waana in la siiyaa fursad u ka qeybqaato shir kasta ama wadahadalla kasta e la qabanayo intuusan baaritaanka dhicin amaba intuu baaritaanka kasta socdo. Meeshi uusan ka jirin wakiil ay shaqaaluhu magacaabeen, baaruhu wuxuu marka arrimaha la xariira xaaladaha amniga iyo kuwa caafimaadka ee goobta shaqada kala tashanayaa tiro kamid ah shaqaalahaas. DACWO: Intuu baaritaanka socdo haddey Minnesota OSHA ay aaminsantahay
in loo shaqeyuhu uu sharciga jebiyey, loo shaqeeyaha dacwad eedeyn ah ayaa lagu soo rogaya. Dacwad waliba waxey si qaas uga hadlaysaa waqti wax laga qaban si markaasi loo saxo waxa dacwadda ku saabsan. Haddey dhacdo inuu baaruhu ka warhelo xaalado ama dhacdooyin ka socda meel kastoo kamid ah goobaha shaqada oo ay suragal noqon karto iney geeri ama dhaawacyo halis dhacaan, baaruhu kaddib marku la soo tashado wakiilka hay’adda wuxuu so rogayaa amarro mamnuucaya dhacdooyinkaas illaa laga gaaro heer ah in la saxo. Dhaqangelinta amarka wuxuu soconayaa illaa 72 saacadood.
EEXASHADA LA MAMNUUCAY: Shaqaalaha shaqada lagama ceyrin karo ama si kasta qof kastana sinnaba kama uu eexan karo sabab ah inuu shaqaalaha so gudubiyay ashtako ku lug leh amniga iyo caafimaadka, ay xitaa kamid yihiin loo shaqeeyaha iyo Minnesota OSHA, ama exercising, on their own behalf or on the behalf of others, any other right they have under the Minnesota OSH Act. Shaqaalihi qaba in asaga/ayada laga eexday kaddib marka u sheetay waxa uu xaqa u leeyahay sida uu qorayo sharciga Minnesota OSH Act wuxuu soo dalban karaa ashtako lo dirayo Minnesota OSHA 30 cisho gudoohoo kaddib marku dhacay falka eexashada. QALABKA BADBAADIYA SHAQSIGA: Marka ay duruufaha kallifayaan, shaqalaha waa in la siiyaa qalab uu qarashkiisa bixinayo loo shaqeeyaha. TABABARKA: Tababarka sida ay durufaha kallifayaan waana iney shaqaalah ka helaan loo shaqeeyaha uuna qarashka bixiyaa. KA WARBIXINTA SHILALKA HALISTA AH/MASIIBADA: Lo shaqeeyeyaashu waxaa shardi ku ah iney ka warbixiyaan shilalka shaqada la xariira oo keenta inuu shaqaale uu ku dhinto ama in isbitaalka la seexiyo shaqaale gaareya saddex ama ka badan ayna u gudbiyaan Minnesota OSHA. Waxbixinnadu waan in lagu soo gudibiyaa muddo sided saacadoo gudohood ayadoo la xariirario 1-877-470-6742 ama xafiiska ee Minnesota OSHA. Wixii ka dambeeya saacadaha shaqada caadiga ah ama maalmaha aan la shaqeynin iyo feestoyinka, warbixinnada waa in sided sacaadood gudahooda loogu diraa qeybta federaliga OSHA telefoonka bilaashka ee laynka halista 1-800-321-OSHA (1-800-321-6742). CASPA (Ashtako Ka Dhan Ah Maamulka Barnaamijga Gobolka - Complaint Against State Program Administration): Haddaad rabtid inaad ashtako ka dhan ee ku taluuqa maamulka Minnesota Occupational Safety iyo Health Act la soo xariir:
U.S. Department of Labor – OSHA 230 S. Dearborn Street Chicago, IL 60604 Telefoonka: (312) 353-2220
GANAAXYADA: Marka la eego sharciga Minnesota OSH Act, loo shaqeyaaha
waxaa dusha laga saarayaa ganaax gaaraya illaa $7,000 oo ku saabsan sharci kasta oo si halis leh u jebiyey ama amngia shaqada iyo heerarka caafimaadka. Shaqaalihi si ula kac ah u jebiya sharciga amniga iyo heerarka caafimaadka waxaa dusha laga saaraa ganaaxyo gaaraya illaa $70,000 ee la xariira xadgudub kasta. Haddey dhacdo in xadgudubyada la saxi waayo waqtiigii loogu ballamiyey dacwadda waxaa haddana maalin kasta dusha laga saarayaa ganaax gaaraya illaa $7,000 illaa xadgudubka laga saxo. Haddii xadgudub kastoo culus ay ka yimaadaan ama uu sababiyo geri ku timaada shaqaale, ganaxa ugu yar ee aan laga hadleynin waa $25,000. Laakiin, haddii shaqaalaha lo shaqeeyaha ay tiradoodu ka yaryihiin 50 shaqaale, ganaaxa ugu horreya ee xadgudub kasta dusha looga saarayo waa $5,000 iyo $5,000 oo dheraad ah sanadkiiba illaa afarta sano ee ku xiga. Wakiilka hay’adda wuxuu ganaxa $5,000 ka saamixi karaa mid kamid ah afarta sanadood, haddey dhacdo inuusan wax ganaax dusha laga saarin kalendarka sanadka la soo dhaafay. Waxaa intaa sii dheer, haddi shaqaalaha loo shaqeeyaha ay ka yaryihiin 50 shaqaale shaqaalaha dhintayna uu shirkadda qeyb ka lahaa, ganaaxa aan laga doodin karin laguma soo rogayo illaa uu wakiilka hay’addu ku amrin in ganaax dusha laga saaro. Haddii si ula kac la sii wado, ama aan la saxin xdgudubyada dhacay aan la saxin ayna dhacdo inuu shaqaale kale ku dhinto, ganaaxa ugu yar ee laga doodin karin wuxuu ahaanayaa $50,000. Ganaaxyda dembiyada uu galo u loo shaqeeyaha si ula kac ama dhowr jeer ku kacay xadgudubyo jebiiyeyna sharciga ama amniga shaqada iyo heerarka caafimaadka waxey ku jiraan sharciga. Xukunka ugu horreya markuu dhaco, ganaax gaaraya illaa $70,000 ama xarig gaaraya illaa lix bilood aya lagu soo rogaya. Dembiga labaad ciqaabtiisu wuxuu noqonaya ganaax gaaraya illaa $100,000 iyo xarig illaa hal sano. Waxaa intaa sii dheer, qofkii si ula kac ah been abuur ku dhaqaaqa, wuxuusan ahayn iyo shahaado uusan lahayn ku buuxsad arji kasta, xog, qorsho ama dokumiinti lagu cdosaday ama loo baahanyahay inuu sharciga dhowro waxaa lagu ciqaabaya ganax gaaraya illaa $20,000 ama xarig illaa lix bilood ah.
ADEECIDDA ISKAA AH: Minnesota OSHA waxey loo shaqeeyaha iyo shaqaalahaba ku gubaabisaa iney si iskood ah u yareeyaan qatarta ayna ku dadaalaan iney hagaajiyaan amngia iyo barnaamijyada caafimaada ee laga bixiyo dhammaan goobaha shaqada iyo warshadaha. Lo shaqeeyayaasha iyo shaqaalahaba waxey adeecidda iskaa ah caawino uga heli karaan iyagoo la xariira xfiis kasta ee Minnesota OSHA. LA TASHIGA: La Tashiga Amniga Shaqada (WSC) waa nidaam qarsoodi ah, waana adeeg aan cidna lagu qasbeynin oo lagu bixiyo adeegyo la tashi ah ee ku saabsan amniga iyo caafimaadka lana siiyo shaqaalaha hawlaha guud iyo gaarka ah. WSC waa qeyb ka baxan hawlaha sharci fulinta ee OSHA. Kaddib markuu loo shaqeeyaha uu codsado, la taliye ayaa soo booqanayo goobta shaqada wuxuuna bixinayaa caawino. WSC waxey loo shaqeyeyaasha ku gubaabisa iney codsadaan aqoonsi buuxda ee ku sawir buuxa ee meelaha halista ah in laga qaado goobta shaqada. Boqashooyinka noocaan ah waxey so marayaan dhammaan xaaladda goobaha shaqada, waxeyna culeysa saaraan sidii dhaawac iyo jirro ku dhacda shaqaalaha looga hortago. La taliyuhu wuxuu kaloo ku caawinayaa sidii loo dhisi lahaa nidaam shaqeeya ee maamulayo amniga shaqada iyo caafimaadka. Booqashoyin kooban ee ku taxluuqa xaalado qaas ah waxaa laga heli karaa la tashiga. Faahfaahin dheerad ee ku taxluuqa adeegyadaan la heli karo ama codsasho ku saabsan booqashda la tashi ah, wac (651) 284-5060 ama wac midka bilaashka ah ee 1-800-657-3776. FAAHFAHIN DHEERAAD AH: Kala xariir loo shaqeeyahaaga ama aad xafiiska kuuu dhow ee MNOSHA si aad uga warbixisid xaalado halis ah ee ka jira goobta shaqada, wax ka baratid sharciyada ku saabsan amniga caafimaadka, ka heshid koobiy ku saabsan xalado qaaas iyo sidii lo dhowri lahaa tusaaloyinka ama aad ku heshid faahfaahin dheerad ee ku saabsan xaqaaga iyo musuuliyadahaaga.
Xafiiska St. Paul 443 Lafayette Road N. St. Paul, MN 55155-4307 Wacidda bilaashka: 1-877-470-OSHA (1-877-470-6742) Telefoonka: (651) 284-5050 Fakis: (651) 284-5741 Xafiiska Duluth 5 N. Third Ave. W., Suite 402 Duluth, MN 55802-1611 Telefoonka: (218) 733-7830 Xafiiska Mankato Nichols Office Center, Suite 520 Mankato, MN 56001 Telefoonka: (507) 389-6507
ASHTAKOOYINKA: Shaqaalaha ama wakiiladooda waxey dacwado u soo gudbin karaan Minnesota OSHA ayna ku codsan karaan in haddey rumeysanyihiin xaaladda goobta laga shaqeeyo ay tahay mid halis qatar u ah ama ay jirto caafimaad xumo. Waaxdu kaddib markey shaqaaluhu sidaa u codsadaan shaaca kama ay qaadeyso shaqaalaha sidaa wax u codsanayo. Ashtakooyinka waxaa laga dhiiban kara xafiis kasta oo ay leedahay Minnesota OSHA ee xag telefoon ama waraaq lo diro, ama internetka laga xariiso shabakadda OSHA. (www.osha.gov). XAQA LOO LEEYAHAY IN LA SHAQEEYO: Shaqaalihi si daacad u diida inuu qabto shaqooyinka qaarkood ama uu ku shaqey lahaa xaalado uu shaqaaluhu si macquul u qabo iney qatar geeri ama dhaawac kaga imaaneyso, haddi uu shaqaaluhu uu marka hore codsaday in loo shaqeeyihiisa/shaqeeyaheeda u saxo xaaladda qatarta ah xaaladda qatarta ahna aan waxba laga qaban. Loo shaqeeyuhu shaqada kama uu saaro karo ama kama exaan karo shaqaalaha codsaday inuu sheegto xaqaas. Laakin waxaa jirto wax xa oo laga helo sharciga Minnesota OSH Act oo shaqaalaha inuu shaqada isaga tago isagoo ku andacoonaya iney qatari ka imaan doonto.
Shaqaalaha si daacad u diida inuu qabto hawl loo diray usaana loo shaqee(yihiisa/yaheeda) u dirin hawlo kale, shaqaalahaas waxaa la siinaya mushaarka lacagta uusan qaban hadduu shaqaalaha wakiilka hay’adda inuu baaritaan ka qaato iyo waxaa xaaladda qatarta ay tahay, kaddibna uu wakiilka hay’adduna u soo caddeyo haddu shaqaalaha hawshaas qaban lahaa ay Qatar halis ama dhaawac kaga imaaneyso.
Warbixinta OSHA waxaa kaloo laga heli karaa shabakadda internetka ee Waaxda Shaqaalaha iyo Warshadaha www.doli.state.mn.us, iyo shabakadda federaaliga ee OSHA www.osha.gov. Warbixinta meeshan ku qoran waa mid dadka oo idil u furan waana la daabacan karaa. Waxaa maqaalkaan lagu heli karaa qaab kale (Braille farta dadka indhaha la, far waaweyn iyo cajalado la dhegeysto) waa haddaad soo wacdid xafiiska MNOSHA Training/Outreach Office (651) 284-5050; wacid bilaash 1-877-470-OSHA (1-877-470-6742); ama TTY ee (651) 297-4198.
Xayesiiskaan waa inuu weligiisba ahaada mid ku yaalaa meel ay sida ugu dhaqsiyaha badan ay ku arki karaan shaqaalaha ay quseyso.
Documents Similar To Department of Labor: 02 poster03
ZU EKAWNAWMIKS - Zoram Tang Fan Fan
Kontrak karyawan 2
Teuku Raffie Yuhanan
CASE STUDY Working Condition in China
Employment Act 1955 (Act 265) - Malaysian Labour Laws
Sejarah Form 3 KEMERDEKAAN NEGARA 31 OGOS 1957.docx